ဘာဆက်လုပ်မလဲ NLD ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » ဘာဆက်လုပ်မလဲ NLD ?
ဘာဆက်လုပ်မလဲ NLD ?
Posted by koaung on Mar 23, 2010 in 2010/2012/2015 Election |0comments
နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီက မတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေ ၁/၂၀၁၀ ကိုလည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ၂/၂၀၁၀ ကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ၃/၂၀၁၀ ကိုလည်းကောင်း၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ၄/၂၀၁၀ ကိုလည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ၅/၂၀၁၀ ကိုလည်းကောင်း အသီးသီးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးသည့်နောက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းများ၊ အလွှာအသီးသီးမှ ပြည်သူများ နှင့် ပြည်ပအတိုက်အခံအင်အားစုများမှ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများအပေါ် ထင်မြင်ချက်အမျိုးမျိုး၊ ဝေဖန်ချက်အဖုံဖုံ ဝေဖန်ပြောဆိုသံများကြားသိနေရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ယခုထုတ်ပြန်လိုက်သည့် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေသည် တည်ဆဲ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ( NLD ) အနေဖြင့် အတော်လေးအကြပ်ရိုက်သွားရသည့် အခြေအေနဖြစ်သွားရပါတယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ ကလည်း ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများအပေါ် ဝေဖန်ချက်အမျိုးမျိုး ပေးနေကြပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ဆိုင်းပြင်းနေသည့် နိုင်ငံရေးပါတီအချို့ ကလည်း မည်သည့်ကြေငြာချက်မှ မထုတ်ပြန် ခင်ကတည်းက ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဦးသုဝေဦးဆောင်သည့်ဒီမိုကရေစီပါတီကတော့ ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်သင့်သည်များကို ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း၊စည်းရုံးဆောင်ရွက်ခြင်းများ စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၂၀၁၀ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲသည် တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်လိမ့်မည်ဟု ၄င်းအနေဖြင့် ယုံကြည်မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောဆိုသွားပါတယ်။ ၄င်းနည်းတူ ဦအေးလွင်ဦးဆောင်သော ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ( ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ) နှင့် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ချုပ် ပါတီတို့မှလည်း ပါတီမှတ်ပုံတင်ပြီးစီးပြီး ပါတီစည်းရုံးရေးအတွက် ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းလည်း ကြားသိရပါတယ်။
လက်ရှိတည်ဆဲပါတီများအနက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောင်ယှဉ်ပြိုင်မလား၊ မယှဉ်ပြိုင်ဘူးလားဆိုတာ လာမည့် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှာ လျှို့ ၀ှက်မဲစနစ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်မည်ဟု ကြေညာထားပါတယ်။ မိတ္ထီလာမြို့နယ် NLD စည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်မြင်မြင့်အေးကတော့ နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက်ကို လျှို့ ၀ှက်မဲပေးစနစ် ကျင့်သုံးခြင်းသည် မည်သည့်ပါတီမှ အစဉ်အလာမရှိတဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လျှို့ ၀ှက်မဲပေးခြင်းသည် မိမိတို့၏ ယုံကြည်ချက်ကို ပါတီအတွင်းမှာပင် မထုတ်ဖော်ရဲသူများ ဖြစ်နေသည်ဟု ဆိုထားပါသေးတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီသည် နှစ် ၂၀ ကာလအတွင်း ပါတီတရားဝင်ရပ်တည်ရေးအတွက် အစိုးရ ငြိုငြင်မည့် မည်သည့်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကိုမဆို မလုပ်ပဲ နေလာခဲ့သည်သာမက အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်သည့် တက်ကြွသည့်ပါတီဝင်များကို ပါတီမှထုတ်ပစ်ခြင်းများ၊ ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဦးတင်ဦးတို့ကို ပါတီမှ ထုတ်ပယ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြင့် ဆက်လက်ရပ်တည်လာခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်မှထုတ်ပြန်လိုက်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေတွင် ပြဌာန်းထားသော အချက်အရဆိုပါက NLD ရှင်သန်ရေးအတွက် ဦးစားပေးစဉ်းစားမည်လော ? ဒါမှမဟုတ် ရွှေဂုံတိုင်ကြေငြာစာတမ်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှ ဖျက်သိမ်းခံမည်လော ? ဒါမှမဟုတ် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို တခြမ်းပဲ့ NLD ပါတီအနေဖြင့် ၀င်ရောက် အရွေးခံမည်လော ? သို့လော သို့လော NLD တော့အဖြစ်ခံ၍မရပေ။
မည့်သို့ပင်ဖြစ်စေ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အနေဖြင့် ယခုအခြေအနေသည် ပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်ရမည့်အချိန်ပင်ဖြစ်တော့သည်။
aung thu has written9post in this Website..